Bit By Bit - su'aalo Waydiinta - 3.2 Inaad weydiisatid aragti
Iyadoo la tixgelinayo in wax badan oo ka mid ah habdhaqankeena lagu qabsaday ilaha xogta, sida xogta maamulka iyo ganacsiga, qaar ka mid ah dadku waxay u maleynayaan in su'aalaha waydiisanayaan wax walbo oo la soo dhaafay. Laakiin, ma aha wax fudud. Waxaa jira laba sababood oo muhiim ah oo aan u malaynayo in cilmi-baarayaashu ay sii wadi doonaan in ay su'aalo waydiiyaan dadka. Ugu horreyn, sida aan uga wada hadalnay cutubka 2, waxaa jira dhibaatooyin dhab ah oo leh saxnaanta, dhamaystirka, iyo helitaanka ilo macluumaad oo badan. Marka labaad, marka laga reebo sababahan dhabta ah, waxaa jira sabab macquul ah: waxaa jira waxyaabo aad u adag in laga barto xogta akhlaaqda-xitaa xitaa xogta akhlaaqda. Tusaale ahaan, qaar ka mid ah natiijooyinka bulsheed ee ugu muhiimsan iyo saadaaliyayaasha ayaa ah dawladaha gudaha , sida dareenka, aqoonta, rajooyinka, iyo fikradaha. Dawladaha guduhu waxay ku jiraan gudaha dadka, marmarka qaarkoodna habka ugu wanaagsan ee looga barto dawladaha gudaha waa in la waydiiyo.
Maqnaanshaha dhabta ah iyo aasaasiga ah ee ilaha xogta, iyo sida ay uga gudbi karaan baaritaannada, waxaa muujinaya Moira Burke iyo Robert Kraut (2014) ku saabsan sida xoogga saaxiibtinimo ay saameyn ugu yeesheen isdhexgalka Facebook. Waqtigaas, Burke wuxuu ka shaqeynayay Facebook si ay u heshay dhamaystiran mid ka mid ah diiwaanka ugu weyn ee faahfaahsan ee dhaqanka aadanaha abid abuuray. Hase yeeshee, Burke iyo Kraut waa inay isticmaalaan sahan si ay uga jawaabaan su'aalahooda cilmi-baarista. Natiijada xiisaha - dareenka rasmiga ah ee udhaxeeya u dhexeeyaha iyo saaxiibkeed - waa dawlad gudaha ah oo kaliya oo ku jirta gudaha garsooraha. Dheeraad ah, marka laga reebo isticmaalka daraasad si loo soo ururiyo natiijooyinkooda xiisaha, Burke iyo Kraut ayaa sidoo kale isticmaalay sahan si ay u bartaan waxyaabaha ku oolka ah. Gaar ahaan, waxay rabeen in ay kala saaraan saameynta ay xiriirka Facebook ku leeyihiin isgaadhsiinta iyada oo loo marayo waddooyinka kale (tusaale ahaan, email, taleefan, iyo weji waji). Inkasta oo isdhexgalka email-ka iyo telefoonka si toos ah loo duubay, baaritaannadaasi ma aysan helin Burke iyo Kraut sidaa darteed waxay ahayd in ay soo uruuriyaan baaritaan. Isku-dubarid xogta ay ka heleen xog-wareysiga ku saabsan xoogga saaxiibtinimo iyo isdhexgalka Facebook-ka ah ee xogta bogga Facebook, Burke iyo Kraut ayaa ku soo gabagabeeyay in xiriirka ka dhexeeya facebook uu dhab ahaantii u horseeday dareenka kor u kaca.
Maadaama shaqada Burke iyo Krau ay muujinayaan, ilaha xogta ee weyn ma baabiin doonaan baahida loo qabo in dadku su'aalo waydiiyaan. Xaqiiqdii, waxaan ka soo qaadan lahaa casharka ka soo horjeeda daraasaddan: ilaha xogta weyni waxay dhab ahaantii kordhin karaan qiimaha su'aalaha waydiinayaan, sida aan ku muujin doono cutubkan oo dhan. Sidaa daraadeed, habka ugu fiican ee looga fekerayo xiriirka u dhexeeya weydiinta iyo indha-indhaynta waa in ay yihiin kuwo dhameystiran halkii laga beddeli lahaa; Waxay u eg yihiin lowska lakabka iyo jelly. Marka uu jiro subag badan, lakin rabo jelly badan; marka ay jiraan xog aad u ballaaran, waxaan qabaa in dadku rabaan baaritaano dheeraad ah.